दलाई लामाले ठहर्याएका बुद्धको जन्मभूमि | Hamro Patro
दलाई लामाले बुद्ध भारतीय हुन भनेर भन्नु चाँही विवेकी बिष्लेषण नहुन सक्छ भन्ने धेरै नेपालीहरुको तर्क रहेको छ । २५०० बर्ष अघि जन्मिएका बुद्ध नेपाली हैनन भने भारती पनि त हैनन्, आखिर देशका सिमानासंग बुद्धलाई गाँसेर हेर्न जरुरी पनि त छैन ।
चुनावको सरगर्मी नेपालमा रहँदै गर्दा एउटा बिवादास्पद कुरा जोडिन पुग्यो, बुद्ध को जन्म बारे बिश्वप्रसिद्ध दलाई लामा को भनाई ।
दलाई लामा बिश्वभरि मै धेरै आदर अनि सत्कारका साथ हेरिने धर्मगुरु अनि बौद्ध दर्शनका प्रवक्ता पनि हुन् । बुद्ध नेपाली हैनन भन्नु जायज कुरा हुनसक्छ किनभने बुद्ध जन्मेको समय देश अनि सिमानाहरु अहिले जस्तो पक्कै थिएनन् । न त भारत थियो न त नेपाल ? न त जगें पिल्लरहरु थिए अनि न त अन्य कुनै सिमानाहरु ? यसअर्थमा बुद्धलाई नेपाली नभनिनु कुनै आपत्ती को कुरा भएन, बिसं १७७९ मा जन्मिएका पृथ्वी नारायण शाह ले एकीकरण गरेका नेपालमा ईशापूर्व पाईला चालेका बुद्धको अस्तित्व गाँसिन जरुरी छैन् । तर दलाई लामाले बुद्ध भारतीय हुन भनेर भन्नु चाँही विवेकी बिष्लेषण नहुन सक्छ भन्ने धेरै नेपालीहरुको तर्क रहेको छ ।
२५०० बर्ष अघि जन्मिएका बुद्ध नेपाली हैनन भने भारती पनि त हैनन्, आखिर देशका सिमानासंग बुद्धलाई गाँसेर हेर्न जरुरी पनि त छैन । भारत भित्र कै एउटा कार्यक्रममा बोल्दै बिश्वभरि सुबिख्यात यि अध्यात्म गुरु ले बुद्ध नेपाली, चिनीयाँ या तिब्बती नभइकन भारतीय रहेको भनेर दाबा गरेको कुरा चाँही खिन्नता को बिषय पक्कै हो ।
हुन त भारतीय मात्र नभनेर सम्पूर्ण भारतबर्षको उदहारण र इतिहास दिदै यि महान नेताले उतिबेला भारत, नेपाल, भियतनाम लगायत रुसका केही राज्यहरु पनि भारतबर्षमा परेका हुनाले बुद्धलाई भारतसंग जोडेको झिनो स्पष्टिकरण पनि दिए ।
भारतबर्ष लाई भारतीय परिचय संग मात्र जोड्ने दुख्खदायी कार्य यि महान अनि ज्ञानी गुरुले किन गरे ?
धेरैले अड्कल काटेका कुरा अनुसार तिव्बत वाट शरण मागेर भारतमा शरण पाएका गुरुले यि शब्द उपहारहरु शरणको लागि उपहार स्वरुप दिएका भन्ने पनि तर्क छ ।
सत्य त के हो भने दलाई लामा सर्वश्रेष्ठ गुरु हुन् जसले आधुनिक्ता संग अध्यात्मलाई जोडेर वडो चित्तोकर्षक ज्ञान दिने गरेका छन् । अहिलेको बिश्वमा स्वर्गीय नेलशन मण्डेला जत्तिकै सम्मान र सदभावका साथ दलाई लामाको नाम लिने गरिन्छ, यि गुरुले क्षणिक प्रचार अनि गुण तिर्नका लागि मात्र यस्तो मन्तव्य दिएका त पक्कै हैनन् ।
स्मरण रहोस् संयूक्त राष्ट्रसंघले पनि बुद्धको जन्म बिषयलाई नेपालमै भनि तोकेको छ । बौद्ध धर्मावलम्बी हरुले तिर्थाटन गर्ने पर्ने ४ वटा महत्वपूर्ण ठाँउहरुमा नेपालको लुम्बिनी पनि पर्दछ । बिश्वभरिका धेरै देशहरु मिलेर लुम्बिनीमा मनमोहक बौद्धबिहारहरु बनाएका छन् । थाईल्याण्डका राजा भूमिबोलको मृत्यूको बार्षिकी मा पनि लुम्बिनी मा उनकी छोरी लगायत बिभिन्न राजपरिवारका सदस्यहरु केही महिना अघि नेपाल आएका थिए । लुम्बिनीको अन्तराष्ट्रिय महत्व बढिरहेका बेला बुद्धको जन्मबारे हरेक कुरा अनि तथ्यहरु संबेदनशील हुन गएको छ ।
दलाई लामाले चीन केन्द्रित स्वतन्त्र तीव्बत आन्दोलन को अगुवाई गरिरहेका छन् । बिश्वस्तरमै हरेक कोणले अगाडि बढिरहेको देश चीनको कमजोर पक्ष तिव्बत रहिआएको छ । चीन को यस कमजोर पक्षको जोखिम बढाउन पश्चिमा देशहरु ले दलाई लामा र यिनका आन्दोलनलाई बढावा दिएका आरोप पनि छ ।
तीव्बती शरणर्थिहरुको लर्कोमा अन्य छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालले खुल्ला दिलले शरण दिएको कुरा पनि दलाई लामाले बिर्सेका छैनन भन्ने आशा छ ।
दलाई लामा बिश्वभरिका बौद्धधर्मावलम्बीका केन्द्रबिन्दु हुन् । उनका शव्दमा शक्ति छन्, बुद्ध जहाँ जन्मिएका भएपनि बुद्धको दर्शन बिश्व लाई जरुरी छ ।
बुद्धको देश तोक्ने काम नगरौं ।